ဝတ္တုတို – Page2– စာအုပ်မြို့တော်
တစ်ခါက အက်ဒီဆင်ဟာ မီးလုံးကိုတီထွင်ပြီးခါစမှာ သူ့ရဲ့ တီထွင်မှုကို မိတ်ဆက်ဖို့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်…။ စာနယ်ဇင်းသမားတွေရောက်လာပြီး အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အက်ဒီဆင်က သူအိမ်ကအလုပ်သမားကောင်လေးတစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့ မီးလုံးကို သွားယူခိုင်းပါတယ်…။ ကောင်လေးဟာ မီးလုံးကိုယူလာပြီး ရောက်ခါနီးမှ ခလုတ်တိုက်လဲပြီး မီးလုံးဟာ ကျကွဲသွားပါတယ်…။ ဒီမီးလုံးဟာ အက်ဒီဆင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တာ အားလုံးသိပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် အင်ဒီဆင်ကတော့ ကောင်လေးကို ဘာမှမပြောဘဲ … စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုသာ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်…။ သူအသစ်ထပ်မံပြုလုပ်ပြီးရင် ပြန်လည်ဖိတ်ကြားပါမယ်ပေါ့…။ ကောင်လေးကတော့ သူ့ရဲ့ နမော်နမဲ့နိုင်မှုကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားရတာကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ နေပါသတဲ့…။ အက်ဒီဆင်ဟာလည်း ဒီမီးလုံးကို ထပ်မံပြုလုပ်ဖို့ရာ လနဲ့ချီပြီးအချိန်ယူလုပ်ဆောင်လိုက်ရပါသတဲ့…။ မီးလုံးပြီးသွားချိန်မှာတော့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြန်ပါသတဲ့…။ သတင်းထောက်တွေရောက်လာပြီးအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်မှာတော့ သူရဲ့ မီးလုံးကိုသွားယူဖို့ရာ ယခင်ကောင်လေးကိုပဲ သွားယူခိုင်းပြန်ပါတယ်…။ ကောင်လေးဟာလည်း ဝမ်းသာအားရ သေသေချာချာ […]
Posted in: ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 07/04/2018
ထင်မှတ်မထားတဲ့ရလဒ်ကောင်း (သို့) စာဖတ်လေ့မရှိသူ
၁၉၄၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ “ပုလဲဆိပ်ကမ်း အလစ်တိုက်ခိုက်ခံရမှု”နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ဟာ စစ်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ် ဌာနဆိုင်ရာ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေလည်း ဒီစစ်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြတယ်။ Doubleday, Penguin, Random House စတဲ့ အမေရိကန်က နာမည်ကြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးတွေကလည်း ပါဝင်လာကြပြီး “စစ်အတွင်းစာအုပ်ကော်မရှင်”ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းက လျင်လျင်မြန်မြန်ပဲ စစ်ပွဲထဲပါဝင်ကြမယ့် စစ်သည်တွေအတွက် စာအုပ်တစ်မျိုးထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်က အမေရိကန်စစ်သားတို့ရဲ့ဝတ်စုံပေါ်က အိတ်ကပ်အရွယ် အစားနဲ့တိုင်းတာပြီး တည်းဖြတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်တယ်။ အဲဒီစာအုပ်တွေကို အများအပြားပုံနှိပ်ပြီး ရှေ့တန်းသွားရောက်မယ့်စစ်သားတိုင်းကို အခမဲ့ဝေငှခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၁ခုနှစ်ကနေ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးချိန် ၁၉၄၅ခုနှစ်ထိ ၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ စစ်သားတွေအတွက် စာအုပ်အမျိုးအစားပေါင်း ၁၃၂၂မျိုးကို အုပ်ရေသန်း ၁၂ဝကျော်ပုံနှိပ်ခဲ့ရတယ်။ စစ်သားတစ်ဦးတိုင်းကို စာအုပ်ဒါဇင်ကျော်ဝေခဲ့တယ်။ စစ်သားတွေဟာ အဲဒီစာအုပ်တွေကို တစ်နေရာကနေတစ်နေရာ ကူးလူးချိန်မှာ ဖတ်ခဲ့တယ်၊ ကုန်းပတ်ပေါ်မှာ ဖတ်ခဲ့တယ်၊ စခန်းချရာနေရာမှာ […]
Posted in: ပုံပြင်, ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 11/02/2018
(၁) သစ်ပင် ပန်းမန် ဥယျဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း။ (၂) အရိပ်အာဝါသကောင်းသော အပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း။ (၃) ကားလမ်း တံတား မြစ်ချောင်းအင်းအိုင် ဆောက်လုပ်ခြင်း။ (၄) ရေချမ်းစင်ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခြင်း။ (၅) ရေလှောင် တာတမံ ရေတွင်းရေကန် လှူဒါန်းခြင်း။ (၆) ဇရပ် ဂူ ကျောင်း ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခြင်း။ (၇) ဆေး ပဒေသာပင် ဆွမ်းပဒေသာပင်များ လှူဒါန်းခြင်း။ ____________________________________________________ အပါယ်လားစေတတ်သော အလှူဒါန (၁၀) ပါး ၁။ သမဇ္ဇဒါန- ကချေအလှူ ( အငြိမ့်ဇာတ်ပွဲ ) ၂။ မဇ္ဇဒါန- သေရည်သေရက်အလှူ ၃။ ဣတ္ထိဒါန- မိန်းမအလှူ ၄။ ဥသဘဒါန- နွားလား၊ မြင်းလား အလှူ […]
Posted in: Books, ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 09/02/2018
တခါတုံးက လယ်သမားမိသားစု လူ့လောကမှာပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နေကြတာကို မကောင်းဆိုးဝါးကြီး က တွေ့တော့ “ဒီလူတွေကို နှောက်ယှက်ရမယ်။ ငါ့ ကိုမေ့နေကြတယ်။ ” ဆိုပြီး မကောင်းဆိုးဝါးလေးတစ်ကောင်ဖန်ဆင်းပြီး လယ်သမားတစ်ဦးကို အကျင့် ပျက်အောင် လုပ်ခိုင်းစေခဲ့ တယ်။ လယ်သမားက သူ့ လယ်သူထွန်ရင်း သူ့ဘ၀ကို သူကျေနပ်တင်းတိမ်နေခဲ့တယ်။ မကောင်းဆိုးဝါးလေးက ထိုလယ်မြေတွေကို မာကြောအောင် ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ လယ်သမားက ခဏနားလိုက် ဆက်ထွန်လိုက်နဲ့ ငြီးငြူသံ ကို လုံးဝမကြားရဘဲ လက်လျော့ပြီး ပြန်သွားရှာတယ်။ မကောင်းဆိုးဝါးနောက်တစ်ယောက်ကို စေလွတ်ပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ သူဟာ လယ်သမားရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုယမယ်ဆိုပြီး ထမင်းဘူး နဲ့ ရေဘူး ကိုယူလိုက်တယ်။ ထမင်းဘူးတွေမရှိတော့တာကို သိတော့ “အော် ငါ့ထက်ဆာနေမဲ့သူ ရှိနေရင် ယူပါစေ။ သူဗိုက်ဝရင် ရပါပြီ” ဆိုပြီး […]
Posted in: ပုံပြင်, ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 08/02/2018
ဥာဏ်ဖြင့် ယှဉ်ကာ နှိုင်းယှဉ်ပါ
” ပန်းပွင့်တို့ မည်သည် အခြား ပန်းပွင့် တို့နှင့် ဂုဏ်တုပြိုင် မနှိုင်းပဲ ၊ အလိုလိုသာ ဖူးပွင့် ကြသည် ” ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူများတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ် ဆိုရင် ဘာဖြစ်မယ် ထင်လဲ…။ သေချာတာ ကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ခု ရှိတယ်။ တစ်ခုက ကိုယ်နှိုင်းယှဉ် တဲ့သူက ကိုယ့်ထက် ပိုတော်၊ ပိုသာ၊ ပိုအောင်မြင် နေတဲ့ သူ ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် သေချာတယ် ကိုယ်က ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ စိတ်ပျက် အားငယ် ဖြစ်သွားမှာပဲ။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်နှိုင်းယှဉ် လိုက်တဲ့သူက ကိုယ့်လောက် မထူးချွန်၊ မထက်မြက်၊ မအောင်မြင်တဲ့ သူ ဖြစ်နေမယ် ဆိုပြန် ရင်လည်း ကိုယ်က အလိုလို ခြေဖျားထောက်ပြီး […]
Posted in: Featured, ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 08/02/2018
“တော်ထက်”တဲ့လူတစ်ယောက်က “ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း” ကို ရေထဲလွတ်ချစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ “ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း”ဟာ ကူးရင်းခတ်ရင်း ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုပေါ် ရောက်လာခဲ့တယ်။ “ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း”ဟာ သဲသောင်ပြင်မှာအနားယူရင်း တစ်ယောက်ယောက်လာရင် အကူအညီတောင်းဖို့ စောင့်နေခဲ့တယ်။ တအောင့်ကြာတော့ အဝေးကနေ သီချင်းသံတစ်သံလွင့်လာတာကို သူကြားလိုက်မိတယ်။ သူချက်ချင်းထရပ်ပြီး အသံလာရာဆီကြည့်လိုက်တော့ လှေငယ်လေးတစ်စီး သူ့ဘက်ကိုဦးတည်ပြီး လှော်ခတ်လာတာကို တွေ့လိုက်တယ်။ လှေရဲ့အလံပေါ်မှာ “ပျော်ရွှင်ခြင်း”လို့ ရေးထားတာကို တွေ့တော့ “ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း” က လှမ်းအော်တယ်။ “ပျော်ရွှင်ခြင်းရေ… ပျော်ရွှင်ခြင်းရေ.. ငါ ရိုးဖြောင့်ခြင်းပါ။ ငါ့ကို လှေကြုံစီးခွင့်ပြုပါ” “ရိုးဖြောင့်ခြင်း” အကူအညီတောင်းတာကို “ပျော်ရွှင်ခြင်း”ကကြားတော့ ရယ်ပြီး … “ဟား.. ဘယ်ဖြစ်မလဲ! ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိရင် ငါဘယ်ပျော်တော့မလဲ? ဒီလောကမှာ ကြည့်စမ်း.. အမှန်တရားတွေပြောလို့ မပျော်ရွှင်ရတဲ့လူတွေ အများကြီး။ ဆောရီးပဲ.. နင့်ကိုငါ မကယ်နိုင်ဘူး” ပြောပြောဆိုဆို “ပျော်ရွှင်ခြင်း”ထွက်သွားခဲ့တယ်။ […]
Posted in: Books, ၀တ္တုတိုLeaveacommentMM Book City	 04/02/2018